တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွင် ပထမဆုံး ဂျာမနီနည်းပညာပံ့ပိုးမှုနှင့် အသေးစားဓာတ်အားလိုင်းဖြန့်ြ - Yangon Media Group
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွင် ပထမဆုံး ဂျာမနီနည်းပညာပံ့ပိုးမှုနှင့် အသေးစားဓာတ်အားလိုင်းဖြန့်ြ
မြိတ်၊ နိုဝင်ဘာ ၂-တနင်္သာရီ တိုင်းဒေသကြီးတွင် ပထမဆုံး ဂျာမနီ နည်းပညာပံ့ပိုးမှုဖြင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန Techmo-Hill Engineering Co., ltd နှင့် ကျေးရွာပြည်သူတို့ ပူးပေါင်း၍ အမျိုးသားလျှပ်စစ် ဓာတ်အားရရှိရေး NEP စီမံကိန်း အသေးစားဓာတ်အားလိုင်းဖြန့်ဖြူး ရေးစနစ် (Solar mini-Grid)ဖြင့် ဆောင်ရွက်သော ကျေးရွာမီးလင်း ရေးဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို နိုဝင် ဘာ ၁ ရက် နံနက် ၁ဝ နာရီက တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး မြိတ်ခရိုင် ပုလောမြို့နယ် ခန္တီးကျေးရွာ အ ခြေခံပညာအထက်တန်း ကျောင်း (ခွဲ)ခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အခမ်းအနားတွင် တနင်္သာရီ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးမြင့်စန်းက အဖွင့်အမှာ စကားပြောကြားပြီး ကျေးလက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးခန့်ဇော်က NEP စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ လည်းကောင်း၊ Techmo-Hill Engineering Co.,ltd မှ Managing Director ဒေါ်ဘရဏီ အောင်က လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေ မှုနှင့်ပတ်သက်၍လည်းကောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားကြသည်။
ဆက်လက်၍ ခန္တီးကျေးရွာ (Solar Mini-Grid) ဖွင့်ပွဲကို စက်ရုံ မုခ်ဦး၌ ကျင်းပခဲ့ရာ တိုင်းဒေသ ကြီး ဝန်ကြီးများ၊ လူရည်ချွန်၊ ဂုဏ် ထူးရှင်နှင့် တာဝန်ရှိသူများက ဖဲ ကြိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးကြသည်။
ယင်းခန္တီးကျေးရွာဆိုလာအ သေးစားဓာတ်အားလိုင်းစနစ်တွင် ထုတ်လုပ်နိုင်မှုစွမ်းအားမှာ ဆို လာ ၆၃ ကီလိုဝပ် (ဒီဇယ်- ၅ဝ ကီလိုဝပ်)၊ အကျိုးပြုအိမ်ခြေ ၂၇၁ အိမ်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းသုံးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်းသုံးကျောင်း၊ ဆေး ပေးခန်းတစ်ခန်းနှင့် လမ်းမီးတိုင် ၆ဝ တို့တွင် ၂၄ နာရီလျှပ်စစ်မီး ရရှိနေပြီဖြစ်ပြီး ဓာတ်အားသုံးစွဲ ခနှုန်းထားမှာ တစ်ယူနစ်လျှင် ကျပ် ၃၅ဝ နှုန်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါစီမံကိန်းကို ၂ဝ၁၆ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁ဝ ရက်မှ စတင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် ဇွန် ၂ဝ ရက်တွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ပြီးစီး၍ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် ဇွန် ၂၆ ရက် မှစတင်၍ ဓာတ်အားလိုင်းသုံးစွဲခဲ့ ပြီး ကုမ္ပဏီမှ ရှစ်နှစ်တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်တစ်အိမ်လျှင် မီးသီးလေးလုံး LED bulb 9W), TV, Phone Charging, Audio, Fan တို့အပြင် အသေးစားအိမ်တွင်းစက်မှုလုပ် ငန်းများ၊ ဆန်စက်နှင့် Work shop စသည့် အသေးစားစက်မှုလုပ်ငန်း များကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
ယင်းစီမံကိန်းကို ကျေးလက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန က ထောက်ပံ့ငွေကျပ် ၂၆၁ ဒသမ ၃၆ သန်း (၆ဝ ရာခိုင်နှုန်း)၊ ကျေး ရွာပြည်သူထည့်ဝင်ငွေကျပ် ၈၇ ဒသမ ၁၂ သန်း (၂ဝ ရာခိုင်နှုန်း)နှင့် ကုမ္ပဏီမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေကျပ် ၈၇ ဒသမ ၁၂ သန်း (၂ဝ ရာခိုင်နှုန်း) တို့ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်းစီမံကိန်းကုန်ကျမှုငွေကျပ် ၄၃၅ ဒသမ ၆၁ သန်း (၁ဝဝ ရာခိုင်နှုန်း)ဖြစ်သည်။
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် အ သေးစားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားစီမံ ကိန်းများကို မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မြိုင်မြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာနှစ်ရွာ၊ ရေ စကြိုမြို့တွင်နှစ်ရွာ၊ ပဲခူးတိုင်းဒေ သကြီး ရေတာရှည်မြို့နယ်တွင် နှစ်ရွာ၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဟင်္သာတမြို့နယ်တွင် တစ်ရွာနှင့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ပုလော မြို့နယ်တွင် တစ်ရွာတို့၌ လုပ်ငန်း များစတင်လည်ပတ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန မှတ်တမ်းများအရ သိရ သည်။
ရန်ကုန်တက်မည့် တရားမဝင်လိုင်စင်မဲ့ ကားရှစ်စီး မရမ်းချောင် အမြဲတမ်းစစ်ဆေးရေးစခန်း၌ဖမ်းမိ
ထိုင်းနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံများမှ ပြန်လာကြသည့် မြန်မာအလုပ်သမားများ ဇွန်လမှ နိုဝင်ဘာလအထိ ၄
သရုပ်ဆောင် လမ်းကြောင်း ဆက်လျှောက်ဖို့ရှိနေတဲ့ အဆိုတော် ရီတာအိုရာ
အမေရိကန်-တောင်ကိုရီးယား ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု၌ စစ်တပ်အင်အားနှင့် လက်နက်များ သုံးစွဲလေ့က?
ကျန်ရှိနေသည့် မြန်မာ – ထိုင်း၊ မြန်မာ-အိန္ဒိယ နယ်နိမိတ် စည်းသတ်မှတ်မှု သဘောတူညီ စာချွန်လွှာ မကြ?
ပနားမားမှတ်ပုံတင်ရေနံတင်သင်္ဘော တောင်ကိုရီးယားကမ်းလွန်တွင် မီးလောင်
နှစ်ဖက် သဘောတူညီချက် ရတယ်ဆိုတဲ့ ထုတ်ပြန်ချက် အဆင့်ထက် တိကျတဲ့အဖြေရှာဖို့ KNPP တိုက်တွန်း